Tababarada CPD ee Xirfadlayaasha | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Nagu saabsan Tababbarka CPD ee Xirfadlayaasha
Abaalmarinta Abaalmarinta waxaa lagu aqoonsaday Kuleejka Royal ee Dhakhaatiirta Guud Boqortooyada Ingiriiska si ay u bixiso aqoon-isweydaarsi 1 maalmood ah oo ku saabsan Pornography iyo dhibaatooyinka galmada. Tababbarkayagu waa mid ku saleysan caddeyn waxaana ku jira cilmi-baaristii ugu dambeysay ee neerfaha ee ku saabsan soo-ifbaxa internetka. Waxaan diiradda saareynaa inta badan saameynta sawir-gacmeedka qaawan ee internetka ee caafimaadka, xiriirada, hanashada iyo xiriirka maxaa yeelay isticmaalkeedu aad buu u faafaa maanta.
Waxaan tababar u fidinnay macalimiinta dugsiyada hoose iyo sare; ardayda jaamacadda; saraakiisha caafimaadka galmada; dhakhaatiirta iyo dhakhtarka maskaxda; kalkaaliyayaasha; xirfadlayaasha rugta caafimaadka galmada; qareennada, u doodayaasha iyo garsoorayaasha; hoggaamiye diineed; hoggaamiyayaasha dhallinyarada; shaqaale bulsho oo ay ku jiraan shaqaalaha caddaaladda dembiyada; madaxda sare ee xabsiyada, tacliinta iyo shaqaalaha rayidka ah.
Waxaan soo afjarnay barnaamijkeenii waxbarida ee fool ka foolka ahaa ilaa dhamaadka xayiraadaha Covid-19. Fadlan nagala soo xiriir halkan info@rewardfoundation.org si aad uga dooddo baahidaada tababarka. Waxaan ku dhejin doonaa wadahadal iyo siminaaro si ay u buuxiyaan shuruudahaaga. Waxaan aqbalnaa guddiyada shaqo ee gudaha Boqortooyada Midowday iyo kuwa kaleba. Tababareyaasheena ugu weyn waxay leeyihiin khibrad sanadeedka 25 mid kasta oo ka shaqeynaya deegaan dhaqameed kala duwan, kooxo da 'kala duwan, heerka waxbarashada iyo waddamada adduunka oo idil.
Aqoon isweydaarsiyadeennu waxay sahamiyaan siyaabaha isticmaalka qaawan ee internetka ay u beddeli karaan dhaqanka galmada, caadooyinka bulshada, cilaaqaadka dadka dhexdooda ah isla markaana ay u kordhin karaan suurtagalnimada fal dambiyeed. Aqoon isweydaarsiyada ayaa lagu soo gabagabeynayaa iyada oo la tixgelinayo daaweynta iyo xeeladaha ka hortagga. Waxay siiyaan qol lagu wada hadlo, tabobar koox kooxeed iyo aragtiyo cusub si kaqeybgalayaashu ugudarsadaan aqoontaan barashadooda.